Weeraro iyo Qaraxyo ka dhacay Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Weeraro iyo Qaraxyo ka dhacay Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose.
On Jul 25, 2020 319 0
Ciidamada malatariga Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saacadihii la soodhaafay fuliyay silsilado howlgalla ah oo ka kala dhacay gobolada Shabeellaha hoose iyo Jubooyinka. Kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada Dowladda federaalka iyo kuwa Kenya.
Saacadihii la soodhafay guutada qaraxyada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar qarax ah wax ay ka fulisay inta udhexeeya deegaanka Warmaxan iyo degmada Wallaweyn ee Shabeellaha hoose.
Qaraxaan oo ahaa mid aad uculus ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Bankrafta ee uu Maraykanku tababaray, kuwaas oo galbinayay gaari tareel ah oo uu saarnaa gaari kale oo la sheegay in uu ahaa noocyada aan xabadu karin,waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Warar lagu kalsoonyahay oo ay heshay idaacada islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa xaqiijinaya in qaraxaas uu ku dhintay 1 askari oo ahaa darawalkii waday gaariga qaraxu haleelay, halka sidokale ay ku dhaawacmeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada Bankrafta, waxaana gabi ahaanba burburay gaarigii qarax lala eegtay.
Ciidamada Dowladda federaalka iyo kuwa Shisheeyaha ee ku sugan wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha hoose waxaa ku adag in ay ku safraan wadooyinka islamrkaana ay isgarsiiyaan sahayda ciidamada iyo takulada dhankasta ah ee ay ka helaan dowladaha reer yurub iyo Maraykanka oo garab ku siinaya duulaankooda Soomaaliya .
Dhanka kale, ciidamada Mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee Jubbooyinka ayaa habeenkii xalay weeraro saf balaaran ah waxa ay ku qadeen ciidamada Kenya ee duulaanka ku jooga deegaanada HOsiingow iyo Kulbiyow ee gobolka Jubada hoose.
Weerarka waxa ay ciidamada Mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ay askarta Kenya kaga suganyihiin deegaanka Kulbiyow ,waxaana in mudo ah la maqlayay hubka noocyadiisa kala duwan.
Goobjogayaal ayaa sheegaya in uu dagaalku ahaa mid aad xoogan .waxaana la rumeysan yahay in uu khasaare gaaray askarta Kenya walow aanan laga helin faahfaahin dheeri ah.
Weerarka labaad waxaa lagu miray isla ciidamada Kenya ee fariisinka ku leh deeganka Hosiingow ee gobolka Jubada hoose .waxana la gaarsiiyay khasaare.
Todobaadkii hore sidan oo kale ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraro xoogan waxa ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada Kenya ee jooga deegaanada Qooqaani, Hosiingow iyo Kulbiyow oo dhamaantood ka tirsan gobolka Jubada hoose, waxaana dagaaladaas ka dhashey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawc oo gaaray ciidamada Kenyaatiga.